उठ्नुहोस् डा.साप ! – Sodhpatra
उठ्नुहोस् डा.साप !
प्रकाशित : १७ आश्विन २०७७, शनिबार २२:१५ October 3, 2020
तपाईं अहिले नितान्त एक्लो हुनुन्छ। सामाजिक संजालमा #imwithdrgovindkc भन्नेहरु जतिसुकै आक्रमक भएपनी वास्तविकता फरक छ। विगतमा अनाहकमा हजारौं जनता मार्नेहरुनै आज सत्तामा अंशबण्डा नमिलेका दाजुभाइ जस्तै भागबन्डा र खिचातानीमा ब्यस्त छन। कस्ले सुन्ने हजुरको माग?
देशका आधा शिक्षित जनता विभिन्न पार्टिका भरौटे कार्यकर्ता छन। बचेका आधा जनता देशभन्दा बाहिर छन। धेरै जनता यस्तो महामारीको बेला दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन। जस्लाई हजुर चाहिएको छ, ती बिपन्न निमुखा जनतालाई थाहा पनि छैन होला कोहि हाम्रो लागि आमरण अनशनमा छ। डा. साप तपाईं नितान्त एक्लो हुनुन्छ।
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुले मेडिकल बिद्यार्थीहरुबाट असुलेको मोटो रकमको कमिसन राजनीतिक पदमा रहेका बिशिस्टहरुको पोल्टामा जान्छ। यो सबैलाई थाहा छ। तपाईंको माग सुन्ने कस्ले ? विगतका अनशनहरुबाट प्राप्त गरेका बुँदागत सम्झौताहरु कति कार्यान्वयन भए त्यसको मुल्यांकन हजुरले राम्रोसँग गरिसक्नुभयो होला।अहिलेको १९ सौं अनशन केको लागि? धेरै भयो भने यो पनि एउटा बुँदामा समेटिने छ। या हजुरलाई हामी गुमाउनेछौं।
डा. साप हजुर यत्तिकै आफ्नो आत्मा प्रताडितगर्दै भोको बसेर जीवन त्याग्नुभयो भने हामीले आफुलाई कहिले माफ गर्नसक्दैनौं । उठ्नुहोस डा.साप ! सारा जनताले भगवान मानेका छन। यो युगको निस्वार्थ सेवक बनेर देखाउनुस। सत्ययुगको शिव जी बनेर कालकुट पिउने बेला रहेन। उठ्नुहोस डा.साप ! दुरदराज सम्म पुगेर बिपन्न र निमुखा जनताको घाउमा मल्हम बन्नुहोस। प्रयोग गर्नुहोस् आफ्नो विवेक, जगाउनुहोस आफ्नो चेतना। स्वविवेक क्रान्ति गर्नुहोस् अनि परिवर्तन गरिदिनुहोस जनताबाट कुकुर भन्दापनी तल्लो दर्जा पाएका सत्तासीन हनुमन्तेहरुको सोंच। उठ्नुहोस डा.साप ! उठ्नुहोस ! !